Gịnị bụ logistics center | e-azụmahịa ozi
Encarni Arcoya | 25/04/2022 09:05 | Ụlọ nkwakọba ihe
Mgbe ị nwere eCommerce, ụfọdụ okwu ị ga-amarịrị n'obi ebe ọ bụ na ị ga-eme ha ihe kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ka na-amalite, ị nwere ike ịhụ na onye ahụ na-abanye n'ụzọ gị. N'ihi na… kedu ihe bụ ụlọ ọrụ lọjistik?
Ọ bụrụ na ị maghị nkọwa ya ma ọ bụ na ị maghị ma ọ bụ ihe dabara gị mma ma ọ bụ na ọ bụghị, mgbe ahụ Anyị ga-enyere gị aka ịkọwa ihe niile okwu a gụnyere.
1 Gịnị bụ logistics center
2 Kedu ọrụ ụlọ ọrụ logistics nwere?
3 Ụdị ụlọ ọrụ lọjistik
3.1 Ogige ahia ejikọtara ọnụ
3.2 ngwa ngwa ngwa
3.3 ngwa ngwa n'elu ikpo okwu
3.4 Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
3.5 Mpaghara ọrụ logistics
4 Enwere m mmasị ịnwe ebe mgbanaka ngwa ngwa?
Ihe mbụ ị ga-aghọta nke ọma bụ ihe anyị na-ekwu site na ụlọ ọrụ logistics. Ma ọ bụ ihe ebe nchekwa, nhazi na, n'ọtụtụ ọnọdụ, nkesa ngwaahịa na-ewere ọnọdụ Kedu ihe ị na-ere.
Ka anyị were ihe atụ. Cheedị echiche Amazon. Ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa nwere ọtụtụ ngwaahịa. Ọtụtụ n'ime ha sitere na ndị na-ere ahịa nke atọ, mana ndị ọzọ na-ahụ maka ụlọ ọrụ ozugbo ma chọọ ebe ha ga-echekwa ngwaahịa ha. Mana kwa ebe a ga-ahazi ma kesaa ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ị ịtụ ngwaahịa mara ebe ọ dị ma kwado ya izipu.
Nke a apụtaghị na ọ bụrụ na ị nwere eCommerce, ị ga-enwerịrị ụlọ ọrụ logistics, ebe ọ bụ na a na-edozi ọtụtụ n'ime ihe ndị a mgbe ụlọ ọrụ ahụ buru ibu na enweghị ike ịchekwa ngwaahịa ya niile ma ọ bụ kesaa ya n'usoro ahaziri ahazi. Ma ọ bụ eziokwu na na mbido, ebe ngwa ngwa ọ bụla dị na eCommerce bụ ụlọ gị. Ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe ebe ị nwere ngwaahịa.
Ka ị na-eto eto, ọ na-adị ntakịrị ma ị ga-achọkwu ohere. Na oghere ọhụrụ ahụ bụ ihe a na-ewere na nchekwa, nhazi na ebe nkesa.
Kedu ọrụ ụlọ ọrụ logistics nwere?
Site na ihe anyị gwara gị na mbụ, ọ bụ ihe dị mma iche na ọrụ ndị ahụ ga-abụ ndị anyị kpọtụrụ aha: chekwaa, hazie na kesaa. Mana n'eziokwu enwere ọtụtụ ọrụ ị ga-eburu n'uche dịka:
Mepụta ihe omume. Chee echiche banyere ihe ndị a: ị nweta iwu maka ngwaahịa abụọ. Ị nwere otu na ụlọ nkwakọba ihe A na nke ọzọ na ụlọ nkwakọba ihe B, nke dị kilomita 15 site na nke gara aga. Nke ahụ pụtara na ị ga-etinye oge n'ịchịkọta ha abụọ. Ugbu a, ị nwetalarị ha, mana ọ na-apụta na ị na-akwadebe iwu n'ụlọ, nke dị kilomita 30. Ị ga-aga n'ụlọ, dozie ya wee rịọ ka onye ozi bịa ma ọ bụ buru ya n'onwe gị, ọ na-egbukwa oge.
Site centralizing ihe niile ị ga-enwe ụlọ nkwakọba ihe gị, ngalaba nkwadebe gị na onye ozi gị dị njikere ịnakọta iwu niile maka ụbọchị ahụ. Ọ gaghị adị mfe otú ahụ?
Nyochaa ngwaahịa. N'ihi na ọtụtụ oge ma ọ bụrụ na ị naghị eburu ngwongwo dị mma, ị nwere ike na-ere ngwaahịa ndị ị na-enweghị n'ezie, mgbe ahụ ị ga-enwe oge siri ike, na mgbakwunye na ịmeghachi azụ na, mgbe ụfọdụ, nwere ike na-efu gị ego.
Jikwaa oge ka mma. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ezute oge njedebe, ma ọ bụ ọbụna n'ihu ha, nke na-enye ndị ahịa ihe oyiyi dị mma.
Ụdị ụlọ ọrụ lọjistik
Ebe a na-ahụ maka ngwa agha enweghị nnukwu ihe omimi. Ha bụ oghere echere maka nhazi ụlọ ahịa online ma ọ bụ site na ụlọ ahịa anụ ahụ (n'ihi na ha nwere ike kesaa ngwaahịa ndị na-efu na ụlọ ahịa dị mfe). Otú ọ dị, ị maara na e nwere ụdị ise?
Ee, na nke ọ bụla n'ime ha nwere àgwà pụrụ iche nke nwere ike ịbụ ihe na-adọrọ mmasị maka azụmahịa gị. Anyị na-akọwara gị ha.
Ogige ahia ejikọtara ọnụ
Amarakwa site na mkpọokwu CIM, ọ bụ ebe etiti dị n'akụkụ obodo ukwu mgbe niile, n'akụkụ ya. N'ihi ịdị nso ya. Ọ bụ ha na-ahụ maka ikesa ngwaahịa ha nwere nye ndị ahịa.. Ma ọ bụghị naanị ha, ma nyekwa ndị na-eweta ya na ọwa “anụ ahụ” ndị ọzọ ha nwere ike ire ngwaahịa ha.
Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ na-emepụta ntutu isi. Ị nwere ike ịre ndị ahịa mana n'otu oge ahụ ị nwere ike ịnwe nkwekọrịta na ọtụtụ ụlọ ịwụ ntutu iji nye ha ngwaahịa gị.
Ọ bụ ezie na a na-eji aha a mara ya, a na-akpọkwa ya ọdụ ụgbọ njem, ma ọ bụ ụgbọ njem.
Na nke a, ọ bụ a center na nnọọ nnukwu ndọtị na nke ahụ na-emeso logistics njem. Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ebe a na-ebutu gwongworo ụlọ ọrụ ahụ ma na-ebutu ya iji kesaa ngwaahịa ha na-ere.
ngwa ngwa n'elu ikpo okwu
Ụdị logistics center bụ nke a kacha mara amara, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke na-ezo aka na nkọwa nke okwu ahụ. Ọ bụ oghere nke anaghị arụpụta ma ọ bụ gbanwee ngwaahịa, kama kama na-eje ozi dị ka nchekwa na njikwa ngwaahịa.
Anyị nwere ike ịgwa gị na ọ bụ ikpo okwu ngwa ngwa karịa. Ma a ka nwere ọdịiche ọzọ. Ma ọ bụ n'ime ya ee na A na-eme nrụpụta na/ma ọ bụ ngbanwe nke ngwaahịa nke mechara gafere n'akụkụ ọzọ nke polygon ka a na-ejikwa ma zipụ ya.
Mpaghara ọrụ logistics
A maara dị ka ZAL, etiti a dị na mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri na ebumnobi ya bụ ịchịkwa ngwa agha nke a na-eme site n'oké osimiri, ala ma ọ bụ ikuku.
Enwere m mmasị ịnwe ebe mgbanaka ngwa ngwa?
Ugbu a ee, nnukwu ajụjụ. Ekwesịrị m ịnwe ebe mgbanaka maka azụmahịa m? dabara m?
Azịza ya adịghị mfe dị ka o siri dị. Ma ọ bụ na, ọ bụrụ na ị na-amalite mana ị na-ere ọtụtụ ngwaahịa ma nwee nnukwu ngwaahịa, ị nwere ike ịgbazite ụlọ nkwakọba ihe ebe ị nwere ike ịchekwa ha mgbe iwu ahụ rutere. Ọ bụrụ na ndị a dị ole na ole, ị gaghị enwe nsogbu ijikwa ha, ma gịnị ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ? Ewezuga iwere ndị mmadụ ụgwọ, ihe kacha dịrị nchebe bụ na ịkwesịrị iji dochie ngwaahịa ndị a na-ere na ị nwere ike ịgbasawanye.
Yabụ na a ga-abịa mgbe ee, ị ga-achọ ebe ngwa ngwa ahụ ka ọ rụọ ọrụ nke ọma dịka o kwere mee maka ndị ahịa gị. Ma ọ dịghị oge a kara aka ime ya; Ụfọdụ ndị ọchụnta ego na-amalite ma nweelarị nke a; ebe ndị ọzọ na-ewe ọtụtụ afọ iji tụlee ya iji meziwanye azụmahịa ha.
Ihe dị mkpa bụ na ị maara ihe ụlọ ọrụ logistics bụ, ọrụ ị nwere ike ime na otu na ụdị ndị dị. Ma ị chọrọ ya ma ọ bụ na ị chọghị ga-agwa azụmahịa gị na nsonaazụ ị na-enweta na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Ngwaọrụ » Ụlọ nkwakọba ihe » Gịnị bụ logistics center
Akụkọ banyere Facebook